StartupEngine: CMS tsara tarehy hanombohana fanombohana | Avy amin'ny Linux
StartupEngine: CMS tsara tarehy hanombohana fanombohana
Nanomboka omaly ny fotoana fanombohana, fa mandraka androany mihamaro ny mpandraharaha sahy mamorona zavatra lehibe ao anatin'ny fotoana fohy ary misy fiatraikany izay mitombo. Ny fanombohana ny fanombohana dia asa tena mahafinaritra, sarotra ary indraindray mampidi-doza, ny fahafaha-mitombo ary ny maodelim-pandraharahana dia azo ovaina no fototry ny fahombiazany, fa miaraka amin'izy ireo dia ny fahaiza-manaonao, ny marketing ary ambonin'ireo fantsonao rehetra. marketing.
Izaho manokana dia mino fa ny fanombohana izay hijoro tsara indrindra eo amin'ny tsena nefa tsy mila renivohitra be dia be dia ireo araraoty ny herin'ny mpiara-miasa aminy amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia vaovao ary ny Internet no fantsom-pivarotana lehibe indrindra.
Ho an'ireo rehetra voalaza etsy ambony, zatra nanaparitaka ireo aho Fitaovana loharanom-baovao misokatra ahafahan'ny Startups mivoatra, manavao, mahomby kokoa ary ambonin'izany rehetra izany, handrakotra ireo faritra misy fiantraikany mivantana amin'ny fiadanan'izy ireo. StartupEngine ohatra, CMS mahery sy tsara tarehy izay mamela ny startup handefa ny tranonkala ao anatin'ny fotoana fohy, na dia mamela ireo startup izay tsy manana ny fahaiza-manao ilaina amin'ny teknolojia aza mba hanana fisian'ny Internet amin'ny fomba matihanina.
1 Inona no atao hoe StartupEngine?
2 Endri-javatra StartupEngine?
Inona no atao hoe StartupEngine?
Izany dia CMS loharanom-baovao misokatra matanjaka sy tsara tarehy namboarin'i Bitro vintana, izay mirona mankany famoronana pejy web ho an'ny fanombohana izay mitazona endrika vaovao, miaraka amina modely sy maodelin-tranonkala izay mifantoka mazava tsara amin'ny firafitra "fenitra" ampiasain'ny ankamaroan'ny fanombohana.
Afaka miaraka amin'ny StartupEngine isika mamorona pejy fitobiana mahafinaritra, izay miaraka amina bilaogy ilaina, pejy antontan-taratasy na fiasa izay azon'ny mpampiasa tsirairay foronina. Toy izany koa, ny fitaovana dia misy a API tsotra nefa mahery izay mamela ny atiny ho jerena avy amin'ny rindranasa na toerana hafa.
StartupEngine Manome fiasa mahery vaika izy io ahafahantsika mitantana ny mpampiasa, ny anjara asany, ny fanamafisana, ny atiny, ny asany, ny endriny ankoatry ny hafa, izy io koa dia manana fampiasana mandroso amin'ny kinova miorina amin'ny git.
Ny fampisehoana ny fampiharana dia azo zahana eto, ary amin'ity galeriana manaraka ity dia hitantsika ny sasany amin'ireo asany:
Anisan'ireo lafin-javatra samihafa amin'ny StartupEngine azontsika atao ny manasongadina:
Maimaimpoana, loharano misokatra ary tsara tarehy.
Mora apetraka, miaraka amina heroku somary tsotra apetraka ary kaody mora takatra.
Ny fanovana sy ny fanovana ny tranokala mampiasa StartupEngine dia tsotra dia tsotra ary tsy mitaky fahalalana ara-teknika, misy ny fampiasa azy rehefa apetraka, noho izany dia tsy voatery raha ny fandaharana no ampiasaina.
Mamela ny famoronana pejy ho an'ny fanombohana miaraka amina famaranana matihanina, ao anatin'izany ny famoronana pejy fandraisana, lahatsoratra amin'ny bilaogy ary ny antontan-taratasin'ireo tetikasanay.
Izy io dia miharo amin'ny rindranasa sy serivisy an'ny antoko fahatelo noho ny API mahery.
Izy io dia mamela ny fitantanana andraikitra sy fidirana amin'ny cms, mpampiasa, fikirakirana, atiny, fampandehanana sns ..., izy rehetra dia avy amin'ny fitantanana kisarisary na baikon'ny tsipika.
Fampiasana mandroso ny fanaraha-maso kinova.
Fitaovana famolavolana mampiasa Boostrap 4 + Vue.js, izay azo hamenoana modely azontsika atao koa.
Izy io dia mampiditra mpampanonta mandroso izay hamela antsika hanao fanovana amin'ny karazany isan-karazany.
Fampidirana amin'ireo serivisy statistika.
Fitaovana maro hafa.
Ny fomba tsotra indrindra hanombohana mampiasa StartupEngine dia amin'ny alàlan'ny fametrahana ny fampiharana ao amin'ny Heroku miaraka amin'ilay dingana voalaza ao githubToy izany koa, azonao atao ny mametraka azy amin'ny mpizara eo an-toerana amin'ny fanarahana ireo dingana izay miseho ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » StartupEngine: CMS tsara tarehy hanombohana fanombohana
AMITEN dia hoy izy:
Fanontaniana, ny Latino rehetra dia mampiasa ny teny hoe "tsara tarehy" hamaritana rindrambaiko, tsy fantatrao ve izay mampihoron-koditra?
Valio amin'i AMITEN
Teresita silva dia hoy izy:
"Emplais" ??? Diso ny "Emplais" !!!
Azonao atao ve ny miteny hoe "mampiasa" avy amin'ny "miasa"?
Mpanao faharoa ploraly endrika ankehitriny amin'ny endriky ny matoantenin'ny mpanao filazana manoro ny matoanteny "hampiasa"?
Valiny tamin'i Teresita Silva
Avlis Atiseret dia hoy izy:
"Diso" ?? Ny fahaliananao amin'ny fanitsiana ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia mendri-piderana. Na izany na tsy izany…: /
Tsy misy fanontaniana intsony, Andriamatoa anao.
Mamaly an'i Avlis Atiseret
Miova 101: Fantatrao ny solosainao
Misafidy ny fiteny fandaharanao voalohany